Indlela ukukhetha ngesitimu ukusetshenziswa siqu?
Sonke ejwayele yokuthi ekhishini ususondele njalo abasizi abaye baba azinakusilela imizuzu ekhethekile. Ngokwesibonelo, cooker ingcindezi kuyasiza hhayi kuphela lapho umuntu uzama ukujoyina indlela yokuphila enempilo. Kuyasiza ukulungiselela ukudla kwekhethelo nokudla ngokulinganisela kungase kusize ukubuyisela ukusebenza komzimba ngemva kokuthola isifo esibi. Ungayisebenzisa ngisho nalapho kunesidingo ukulahlekelwa amakhilogremu extra ambalwa ezintathu. Kodwa ukuchaza kudivayisi ukuze ubhekane nemisebenzi yawo, kubalulekile ukukhetha imodeli kwesokudla.
Okubalulekile nenqubo yokukhetha
Indlela ukukhetha ngesitimu efanelekayo? Kubalulekile ukuba acabangele amaphuzu ezibalulekile eziningana. Uma ukuthenga kuyadingeka ukugxila amandla zedivayisi, isimiso yokusebenza, ukulawula uhlobo, khona imisebenzi ehlukahlukene nomakhi. Ngokwesibonelo, umkhumbi tefal kamakhi French akudingi ukukhangisa. She - samuntu wonke imibono eziphambili lobuchwepheshe, nokupheka izinqubo kulula ngangokunokwenzeka.
Umugqa okunezinhlobonhlobo uvezwa ezihlukahlukene enkulu, ngakho lapho ukhetha yimuphi hlobo locingo, udinga ukuqondiswa endaweni yokuqala umthamo zedivayisi. It ziyahlukahluka kusuka Watts 400 kuya 5100. Ayanda score, lo sekukonke ngeke ngesitimu. Idivayisi ubhasikidi omkhulu kulula ukusebenzisa in imindeni emikhulu. Kodwa ngaphambi kokuthenga zabo kuyadingeka ukuqinisekisa isimo wiring. Kungase nje ngeke usinde. Ngakho-ke, cooker ingcindezi ephethe namandla 5100 Watts kuyinto ekahle zokudla. Kukhona lwabelwe oseceleni ngabo. Ukuze ekhaya kungcono kakhulu ukuba ngikhethe uhlobo lomsebenzi phakathi lezi nemingcele.
kudivayisi ngesitimu ulula. Siqukethe izindlu metal, Ukushisa PETN nobhasikidi, lapho imikhiqizo abekwa. Umthamo omunye ubhasikidi iyahlukahluka kuye ngokuthi imodeli. Kungaba 1.5-3.5 amalitha. Imishini edingekayo ukuze baye ayivaliwe isitsha perforated ngoba wokudla. Baskets kungaba esobala futhi okungezona esobala, ikhanda esikhiphekayo, okusaqanda nxazonke. Ayikho umehluko ukusebenza. Ngakho-ke, i-choice ifomu - iyindaba ukunambitheka. Bona shazi yonke ukwehluka amaqoqo ephelele kuzovumela teleshopping TTC.
Ukukhetha ngesitimu, ochwepheshe batusa unaka ukwakhiwa Pallets. Amanye amadivayisi abe epanini on bonke obhasikidi. Kulokhu, iphunga ekulungiseleleni izitsha ezahlukene ngeke zixutshwe. Hhayi bonke uyajabula. Kulokhu, kufanele ukhethe ngesitimu, okuyinto has a ugqoko ngaphansi kwesitsha ngamunye.
Esinye isici esibalulekile - uhlobo umphathi wedivaysi. Kungaba athutha futhi ngekhompyutha. Umehluko kwelinye: control mechanical imodi bembonisa, kanye timer, umane vula Ukudayela nesibalo ukwahlukana ufuna.
Lapho control electronic usebenzisa keypad ne isibuko. On futhi libonisa zonke izigaba kubhayela ukusebenza kabili. Nakani! onobuhle Electronic babe izici ezingaphezu kuka lokukhanda. Banezinhliziyo kokuqala idiphozi okukhethwa kukho, isibonelo, noma ukugcina ukudla isimo efudumele ngaphakathi abavumelana isikhathi. yamalahle Electronic zinhle, kodwa hhayi wonke umuntu uyakwazi ukuqonda ngokushesha electronics kuyinkimbinkimbi. Futhi futhi kuyadingeka ukuba acabangele lapho ekhetha ngesitimu yazo ukuze bazisebenzise.
Garret Ace 250 (umtshina). Metal Detector Garret Ace 250: izici, ukubuyekezwa, intengo
Varistor - kuyini? Varistors: izimiso ezisebenza, izinhlobo futhi isicelo
Umshini wokuwasha engesiyo. ukungasebenzi olungenzeka umshini wokuwasha
Indlela ukukhetha kwesokudla jika electronic izinsana
Indlela ukuxhuma amanzi unikeze umshini wokuwasha? Indlela ukuxhuma umshini wokuwasha
Recipe Webmasters Noma Ngokwakhe Fast Food
Indlela ukulungiselela jelly kusuka apula ebusika
Mechanic Chief: incazelo umsebenzi futhi imisebenzi
Umdwebi u-Uborevich-Borovsky: izici zomsebenzi wakhe
Indlela ukusindisa amandla ekhaya kwesokudla
Indlela anganipha isipho ngezandla yakho yokuqamba "Angenamvubelo aphume amathawula?" Master Class embodiments ezintathu